ပဋိပက္ခများ (သို့ မဟုတ် ) ကျွန်တယောက်ရဲ့တော်လှန်ရေး -(၁)
တော်လှန်ရေး နေ့ မတ်လ ၂၇ ရက် နေ့၊ အမှတ်တမဲ့ပါဘဲ ။ ကိုယ့်ကြွေးပူနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ ။ညနေက အမေ့ သတိရလို့အိမ်ကို ဖုံးဆက်တော့ တူမလေး လာကိုင်တော့ အထူးအဆန်း ။ ဟဲ့နင်တို့ကျောင်းမတက်ရဘူးလား လို့ မေးတော့ မှ ဒီနေ့ကျောင်းပိတ်တယ်တဲ့။တပ်မတော်နေ့ တဲ့ ။
ကိုယ်တောင် နဲနဲ ကြောင်သွားတယ် ။ အရင် က တော့ တော်လှန်ရေးနေ့ လို့ ဘဲ စိတ်ထဲ စွဲခဲ့ဘူးတာကိုး။ဘယ်အချိန်က စပြီးတပ်မတော် နေ့ ဖြစ်သွားမှန်း သမိုင်းမကြေခဲ့ တော့လည်း မသိလိုက်မိဘူး ။တော်လှန်ရေးဘဲ စိတ်ထဲ စွဲ နေဘူးတာ ။ ( တကယ်ပြောတာပါ )
ဒီတော့မှ တချက်သတိထားမိလိုက်တယ် ။ ရွှေမြန်မာပြည်က ရွှေသူငယ်ချင်းလေးတွေ အားလုံး ။အားလုံး ကို ဒီနေ့တနေ့ လုံး အုတ်လမ်းပေါ်တက်ကြတာ မတွေ့ မိပါဘူးလို့ လေ ။ တော်လှန်ရေးနေ့အထူးစပါယ်ရှယ် အစီအစဉ်အရကိုးနတ်ရှင် ကြီးတွေလည်း အားလုံးဒေါင်းနေကြပါလားလို့။မူးပြီးဒေါင်းကုန်ကြသလားတော့မသိကြောင်းပါ။အင်း ၊ ဒီလိုသာ အုတ်လိုင်းပေါ်တက် လျှောက်လို့မရတာ ကြာရင်တော့အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကုန်ကြတော့မှာဘဲလို့ တွေးမိရင်း... ရင်လေးမိပါသေးတယ်။
တော်လှန်ရေးဆိုတာဘာလဲ ။ ဘာလို့ တော်လှန်ကြတာလဲ။မြန်မာ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တော်လှန်ရေးကို
အားလုံးသိပြီးကြတာမို့ဘာမှထူးထူးထွေထွေမပြောလိုပါဘူး။(ကိုယ်တိုင်ကလည်းသေချာ မမှတ်မိတော့လို့ပါ)
။ဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားက ဖိနှိပ်ခံရတာတွေ မတရားမှုတွေ မခံနိုင်ကြတဲ့ အဆုံး ဖိနှိပ်နေတဲ့ သူတွေကို ဖီဆန်ပြီးလွတ်မြောက်ရာ ရှာကြတဲ့ အခါ၊ဒီလူတန်းစားနှစ်မျိုးအကြား မလွဲမရှောင်သာ ဖြစ်ပွားရတဲ့ ပဋိပက္ခ တိုက်ပွဲ များကို တော်လှန်ရေးလို့ ခေါ်ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ် (ဒါကတော့ ကိုယ်နားလည်သဘောပေါက်သလို ပြန် ဖေါ်ထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်မှု သက်သက်သာဖြစ်ပါတယ် ။ မှားနေရင်တော့ အမှန်ကို ဝေဖန် ထောက်ပြပေးကြပါနော် )
အခုပြောပြမဲ့ အကြောင်းလေးကတော့ ဘာမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော်လှန်ရေးကြီး တခုတော့မဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်နဲ့သက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အသေးစားတိုက်ပွဲ တော်လှန်ရေးလေးတခုပါ ။ ဘာလက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်မှ မလိုလိုက်တဲ့ ဒီ တော်လှန်ရေးလေးအကြောင်း ခုချိန်မှာပြန်ပြီး စမြုံ့ ပြန်ရတာ အတော်လေး အရသာ ရှိလှပါတယ်။
ကိုယ်တို့ လို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်မနေရဘဲ မိဝေးဘဝေး သူတပါးတိုင်းပြည် လာပြီး ဘဝ ကို ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်း ဖို့အလုပ် လာလုပ် နေရတဲ့ အဖိနှိပ်ခံလူတန်းစား တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် ကျွန်လူတန်းစား တွေ အမိမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ စည်းဝိုင်းအပြင်ဘက်မှာ ခုချိန်မှာဆို သန်းနဲ့ ချီပြီးရှိနေကြပါပြီ ။
ဒီလို နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ လာပြီးရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့လူတွေ ထဲ မှာ လူတိုင်းရာနှုန်းပြည့် အဆင်ပြေနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး ။ မသိတဲ့ သူတွေကတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်သွားလုပ်ရင် ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရတယ်လို့ ဘဲ အထင်မှတ်နေကြတာ ။ မျက်ရည်တွေ အများကြီးကျခဲ့ ရတာတွေတော့ကိုယ်ကလွဲလို့ တခြားသူတွေ သိကြမယ်မထင်ပါဘူး။
ခုလဲ ဒီကိုယ်တွေ့ ဇာတ်လမ်းလေး ပြန် အမှတ်ရမိလို့ ပါ။ ဒီလိုလေ ဒီလို ။ မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောရတာပေါ့ .
ဒီနိုင်ငံရောက်ခါစ စကားမတတ် ၊ စာမတတ် နဲ့အတော်လေး ဒုက္ခ ရောက် ။သောကဝေ ခဲ့ ရတာ ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြောက်စိတ် ဆိုတာကြီးကြောင့်ပါ ။ ကိုယ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ပညာရေးစနစ်ကြီးမှာ One way teaching , Teaspoon feeding ဆန်ဆန်တွေဘဲရှိခဲ့ ကြတာ ။ ဆရာမက အတန်းထဲ ရောက်တာနဲ့သင်ရိုးညွှန်တမ်းအရ ပါတဲ့စာတွေ တလစပ် ရွတ် ၊ ကိုယ်တို့ ကလဲ ဘုမသိ ဘမသိ အလျှင်မီအောင် မနဲအမှီလိုက်ရေး။ အချိန်စေ့လို့ဆရာမ အတန်းအပြင်ရောက်သွားမှ အချင်းချင်း မမှီလို့ လွတ်သွားတဲ့ကွက်လပ်ပေါင်းများစွာ လိုက်ဖြည့်ကြနဲ့၊ ပြီးတော့ မှန်တာရော မှားတာရော မသိ နားမလည်တာတွေရော နှုတ်တိုက် အလွတ်ကျက်ပြီး အတန်းတွေ တက်လာကြရတာလေ ။ Discussion လို ၊ ဆရာ နဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့အပြန်အလှန် ဆွေနွေးဖလှယ် ပညာ သင်ယူခဲ့ ကြရတာ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ။ သင်လိုက်တဲ့ အရာတခုကို လက်တွေ့့ဘဝမှာ ဘယ်လို Apply လုပ် ၊အသုံးပြုလို့ ရတယ်ဆိုတာလဲ သေချာ မသိခဲ့ ကြပါဘူး ။ဒီတော့ အတွေးအခေါ်ပိုင်းတွေ မှာ သူများတတွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် အနဲနဲ့ အများတော့ နောက်ကျ ကျန်နေခဲ့ ကြတာပေါ့ ။
ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုတွေ အပိုင်းတွေ မရှိကြတော့ လူကြားထဲ ။ လူရှေ့ မှာ ထွက်ပြောဖို့။ဆွေးနွေးဖို့ ကို ရှက်ကြောက် နေကြတတ်တာ များပါတယ် ။ အဲဒီ စိတ် က လူတော မတိုးဝံ့ တဲ့စိတ်လို ဖြစ်သွားတတ် ပြီး နောင် လူအများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ တပန်းရှုံး နေတတ်တာပေါ့ လေ ။
ဒီလိုနဲ့ဒီမှာ နေတာ ။ လုပ်တာ ၄ -၅ နှစ်လောက် ကြာတော့ ။ကိုယ့် ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ။ဒီကလူတွေ နေပုံ။ပြောပုံ ။လုပ်ကိုင်ကြပုံတွေ နဲ့ ရင်းနှီးသလောက်ရှိပြီး သူတို့ ရဲ့အလုပ် လုပ်တာ ။ ဆက်ဆံတာတွေ မှတ်သင့်တာတွေလိုက် အတုယူ တတ်လာတော့ ( ရှင်းရှင်းပြောရရင် လူရည် နဲနဲလည်လာတာပေါ့ )နေရာတကာ လိုက်ကြောက်နေတတ်တဲ့ စိတ်က အတော်လေး နဲပါးသွားပါတယ် ( လူပါးဝချင်တဲ့ စိတ်တောင် တခါတရံ ဖြစ်လာတတ်လို့မနဲထိန်းနေရတယ် )။ ကိုယ့်ဖက်က မှန်နေရင် လုပ်ရဲ ပြောရဲတဲ့ စိတ်တခု ရလိုက်တာ အမြတ်ပါဘဲ။
ဒီကအလုပ်သမားတွေဟာလည်း ဒီနိုင်ငံရဲ့အလုပ်သမားစည်းမျဉ်းဥပဒေ အရ သူ့ အခွင့်အရေး သူခံစားခွင့်ရှိကြပါတယ်။ တချို့ အလုပ်ပိုင်ရှင် သူဌေး ကလည်း လူလည်ကျပြီး လက်တလုံးခြား သူ့ ဖက်သူယက်တဲ့့နေရာလေးတွေလည်း ရှိတတ်တာပေါ့လေ ။ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား ( ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့ သခင်နဲ့ ကျွန်ပေါ့ လေ ) ကြားထဲ ပဋိပက္ခတ်လေးတွေ ရှိတတ်ကြတာ ဓမ္မတာ ပါဘဲ ။ လူတွေက ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အရင်စဉ်းစားတတ်ကြတာမို့ ကိုယ်ဖက်ကနာမယ်ထင်ရင် မလုပ်ချင်ကြဘူး ။တဖက်ကလည်းကိုယ့်အတွက်ပိုပိုသာသာကျန်အောင်လိုချင်နေတတ်ကြတာ မဟုတ်လား။အင်း ဒီတော့ ဒီတော့ ဒီလို အဖြစ်မျိုးလေးကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ ရတော့တာပါဘဲ။
အခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ နေရာလေးကို မရောက်ခင်က YangMai လို့ ခေါ်တဲ့ မြို့ လေးမှာလုပ်နေစဉ်အခါမှာပေါ့။ အဲဒီဆေးရုံ က ပုဂ္ဂလိကပိုင်အလတ်တန်းစားလေးပါ ။ဒါပေမဲ့ သူက high way လမ်းမကြီးနဲ့ သိပ်မဝေးဘူး ။ high way ကနေ ခွဲထွက်ဆင်းလိုက်ရင် တမိနစ်စာတောင် မမောင်းရတဲ့ အကွာအဝေးလေးမှာ ရှိနေတာ ဆိုတော့ ယာဉ်တိုက် ကားတိုက်မှု ၊ အနီးနားမှာရှိနေတဲ့Industrial Zone မှ အလုပ်သမားတွေ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရကြရင် အဲဒီဆေးရုံကို ပို့ ကြတာများတယ် ။ ဒီတော့ လူနာများ၊ အလုပ်များတယ်ပေါ့ ။ အဲဒီ သူဌေးက ဒီမြို့ငယ်လေး တခုတည်းမှာတင် ဆေးရုံ ၂ခု ရှိနေပြီးသားလေ ။
ဒီတော့ ကိုယ်တို့ လည်း လိုရင်လိုသလို ဆေးရုံ ၂ခု ကို ဟိုပြေးဒီပြေး သိမ်ကြီးဈေးလုပ်ရတယ် ။ day and night duty shift ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း လှည့်လုပ်နေရတာပေါ့နော် ။ ပင်ပန်းသလောက် တန်ရာတန်ကြေး ရတော့လည်း မငြီးမငြူလုပ်ကြတာပေါ့လေ။။ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက် သူငယ်ချင်းတွေ ၊ ဆရာမလေးတွေနဲ့ အားတဲ့ အချိန်လေးတွေမှာ ဟိုလည် ဒီလည် စားကြသောက်ကြနဲ့အတော်လေးပျော်စရာကောင်းခဲ့ တဲ့ အချိန်လေးတွေပါဘဲ။ဒီလိုနဲ့ အချိန်၂ နှစ်လောက်ကြာသွားတယ် ။ နောက်တော ဒီမြို့ လေးမှာ ဘဲ နောက်ထပ် သူ့ ထက်ကြီးတဲ့ ဆေးရုံကြီး တရုံ ကို တခြားသူဌေးတွေက လာဆောက်ကြတယ် ။ ဒီတော့ ကိုယ်တို့သူဌေးကလည်း သူ့ စားခွက်လုမဲ့သူ ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတာ တွေးမိပြီး အပြိုင်အဆိုင်တွေ လုပ်ရတော့တာပေါ့ ။လူနာတွေလာအောင်ဆွယ်ပုံ ဆွယ်နည်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းတော့ အသေးစိပ် မပြောချင်တော့ပါဘူး ။ စီးပွားရေးဈေးကွက် နားလည်တဲ့ သူတွေ သိပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ ။ ဒီတော့ သူဌေး အကျိုး အတွက် ကိုယ်တို့အလုပ်တွေ အပိုအလုပ်တွေ pressure တွေ ၊ tension တွေ တဖြေးဖြေး ပိုများလာကြတာ နဲ့ပျော်စရာ အချိန်လေးတွေ တစ စ နဲပါးလာရတယ် ။
ဒါက ဦးစွာ ပထမ ဆုံးရှုံးခြင်းတခုပါ ။ ဒီလောက်ကတော့ ခံနိုင်ပါတယ် ။ လည်ပတ်ချိန် နဲပြီး အလုပ်ချိန် များလာတယ် ။ ကိစ္စမရှိဘူး ။ overtime ကြေးရတာကိုး ။ တန်သေးတယ်ပေါ့ ။ဒီလိုနဲ့တနှစ်လောက်ကုန် ခဲ့ ပြန်ရော ။ပျော်ပျော်ပါဘဲ ။ အဟဲ ။ဒါပေမဲ့ သူဌေးကတော့ မပျော်နိုင်ရှာဘူး ထင်ပါရဲ့။ ရှိတဲ့ လူတွေဟာ ပိုပြီးပူပင်သောက ရောက်ကြရတယ်ဆိုတာ တကယ်ပါဘဲ ။ရလေ လိုလေ တွေမဟုတ်လား ။
ဒီအချိန်မှာဘဲ ဒီထိုင်ဝမ်ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာ အနှစ်၁၀၀ အတွင်း အကြီးမားဆုံး မြေငလျှင်ကြီးတခု ၁၉၉၉- ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ မှာ လှုပ်ခဲ့ တယ် ။ လူပေါင်း ၃၀၀၀ လောက်သေကျေပြီးအပျက်အစီးနဲ့ အိုးအိမ်မဲ့တွေ အများကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။ပြည်တွင်းပြည်ပက အကူအညီတွေ ချက်ချင်းရောက်လာကူညီကြတယ်ပေါ့ ။မှတ်မိသလောက်ပြောရရင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ဟာ နောက်တနေ့ မှာဘဲ ဦးဆုံးရောက်လာတဲ့ ပြည်ပ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ ပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ အနောက်တိုင်းအတော်များများက လာရောက်ကူညီပေးကြပါတယ် ။အလှူငွေတွေလဲ ပြည်တွင်းထဲမှာချက်ချင်း အစိုးရပိုင်းရော ။ပုဂ္ဂလိကပိုင်းဆိုင်ရာတွေရော ပေးပို့ ကြတာ အချိန်ပိုင်းနဲ့့အမျှ ရုပ်မြင်သံကြားတွေထဲ ထုတ်လွှင့် ကြေငြာပေးနေကြတာ ။အတော်လေး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ် ။
ဆေးရုံတွေက လည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ လုပ်အားပေး ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ တွေ လွှတ်ကြတယ် ။ ကိုယ်တောင် သွားချင်လို့ စာရင်းသွားပေးတာ အမျိုးသားတွေဘဲ သွားရမယ်ဆိုလို့သွားခွင့်မရလိုက်ဘူး ။ဒီတော့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်ဆက်လုပ်ကြရတာပေါ့ ။( ဒီငလျှင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်မှ သပ်သပ် တင်ပြပေးပါမယ် )။ ဒီလိုနဲ့တတိယမြောက်နေ့ ကျတော့ သတင်းထဲ ကြားလိုက်ရတာ ..ကိုယ်တို့ ဆေးရုံနာမယ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ သောင်း ၃၀၀ အလှုထဲ့ ဝင်ကြောင်းပေါ့လေ ။ တချို့နာမယ်ကြီး ကုမ္ပဏီကြီး ။စက်ရုံကြီးတွေဆိုရင် ဒီထက်မက သောင်းထောင်ပေါင်းများစွာလှူကြတယ်ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ နောက်မှာ ဆက်ပြောတာ အလုပ်သမားတွေရဲ့ တရက်စာလုပ်ခငွေ လို့ ထဲ့ ပြောတော့ စိတ်ထဲ မရှင်းလို့ဆရာမ တယောက်ကို မေးကြည့်တော့မှ နားလည်တော့တယ် ။ ရွာသားအလှူ သူကြီးကောင်းမှု ပါလားလို့။ ရှိသမျှ အလုပ်သမားတွေရဲ့တနေ့ စာလုပ်ခငွေ ကို ကာယကံရှင်က လှူဖို့စိတ် ရှိတယ် ၊ မရှိဘူး အရင် မမေးမမြန်းဘဲနဲ့ ၊ နှုတ်ပြီး ။ဖြတ်ပြီး ၊ အဲဒီပိုက်ဆံတွေနဲ့ ပိုင်ရှင် သူဌေးတွေ က မျက်နှာလုပ် လှူကြတဲ့အလှူ ကြီးပေါ့လေ ။တကယ်ဆိုရင်ဖြစ်သင့်တာ က ကိုယ်စေတနာရှိသလောက် အလှူငွေထည့်ကြပါဆိုပြီး ကောက်ခံပြီးမှ လှူတယ်လို့ ဖြစ်ရမှာပေါ့ ။
( ကိုယ်တိုင်ကလဲ စေတနာသဒ္ဒါတရားမရှိလို့မလှူဘူးရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး ။ ၂၀၀၈ ဗမာပြည်မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်သွားတုန်းကလည်း အဆက်အသွယ်ပြန်ရတာနဲ့ ချက်ချင်းဘဲ ရန်ကုန် ရန်ကင်းစင်တာမှာရှိတဲNGOရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းဆီဆက်သွယ် ပြီးတော့US မှာရှိနေတဲ့ငယ်
သူငယ်ချင်း(မူဆလင်မလေး)တယောက်ကလဲလှူချင် တယ် ဆိုတာနဲု့ဒုက္ခရောက်နေ့တဲ့သူတွေဆီအမြန်ဆုံး
ရောက်အောင် လိုတာတွေဝယ်ဖို့လှူဖို့ ။ NGOက သူငယ်ချင်းမလေးကလည်း ကိုယ်တိုင်သွားပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ ။ အိမ်က အမေ့ ဆီခက်ခက်ခဲခဲ ဖုံးဆက်ပြီး ။အရင်စိုက်ပေးထားပါ မှာပြီး။ NGO သူငယ်ချင်းက လူအားစိုက် ပြီး၊ စိတ်ထဲမှန်းပြီး လှူခဲ့ ကြဘူးပါတယ် ။
အဟဲ အဲဒီတလောတုံးက ဗမာပြည်ကြီးကို ဘယ်လောက်ဆက်သွယ်လိုက်ရသလဲဆိုတော့ တယ်လီဖုံး bill လာတော့မှ မျက်လုံးပြူးရသေးတယ် ။ ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဝမ်းနည်းမိတာရော ။ တာဝန်ရှိတဲ့ သူတွေရဲ့ တာဝန်မဲ့ မှုတွေအပေါ် ဒေါသထွက်မိတာရော ၊ ကိုယ့်အလှူအတွက် ကျေနပ်မိတာတွေရော ။ ခံစားမိတဲ့ ခံစားချက်များ ဘယ်လို ပြန်ပြောရမှန်းတောင် မသိနိုင်လောက်အောင်ပါဘဲ။ ဒါက လှူဒါန်းခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြားဖြတ် ခံစားမိတဲ့ အကြောင်းအရာတခုပါ ။ လမ်းကြောင်းလွဲမှာစိုးလို့့ဒီကြောင်းဒီလောက်နဲ့ ဖြတ်ကြတာပေါ့နော် )
ဒီတော့ မမေးမြန်း မပြောဆိုဘဲ အလုပ်သမားတိုင်းရဲ့ တနေ့ တာ လုပ်ခငွေကို ဖြတ်တောက်ပြီး မျက်နှာလို မျက်နှာရ လှူတဲ့ အလှု မှန်းသိလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲ တမျိုးဖြစ်သွားတယ် ။ ဒီ တရက်လုပ်ခ ငွေလေးကို နှမြောလို့ လဲ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒီထက်မကတာလဲ ကိုယ်လှူခဲ့ ဖူးတာဘဲလေ ။ ဒီက သူဌေးတွေ မျက်နှာလုပ် လူလည်ကျ တာကို မကျေနပ် ဖြစ်မိတာပါ ။ ဒါကြောင့် နေ့ လည် အလုပ်နဲနဲပါးတဲ့ အချိန် သူဌေးရဲ့ ရုံခန်းထဲ ထိ သွားပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောပြဖြစ်တယ် ။အလှူလုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်က စိတ်ထဲက ရက်ရောစွာနဲ့စေတနာအပြည့် နဲ့့လှူရတဲ့ အကြောင်း ။ခုလို တရက်လုပ်ခ ဖြတ်ပြီးလှူတယ်ဆိုတာ အနိုင်ထက်စီးသဘော သက်ရောက်နေတဲ
့အကြောင်းပြော ပြတယ် ။ သူက အစပထမတော့ သဘောမပေါက်ဘူး ။ကိုယ်စိတ်ဆိုးလို့ လာ ရစ်နေတယ်လို့့ထင်နေတာ။ ဒါနဲ့ အခြေအတင် ပြောကြရင်း စကားသံနဲနဲကျယ်လာလို့သူ့ ရဲ့စက်ကပ်ကျေး ( secretary မလေး) ကတောင် အနားမှာရစ်သီ ရစ်သီနဲ့ လာပြီး အခြေအနေလာကြည့် နေသေးရဲ့ ။ ဒီတော့မှ သူဌေးငတိ က စက်ကပ်ကျေးကို ကော်ဖီ နဲ့စားစရာယူလာခိုင်းပြီး ကိုယ့် ကိုလည်းစိတ်မဆိုးဖို့။သူလည်းဒီလောက်ထိ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားမိလို့ဒီလို လုပ်တဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြပါတယ် ။ ဒီတော့ မှ ကိုယ်လည်းစိတ်ပြန်လျှော့ပြီး ငါတို့ဗမာတွေ ၊ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေ အလှူအတန်းရက်ရောကြတဲ့ အကြောင်း ။ ခု ကိစ္စကလည်းမလှူချင်လို့ လာပြောတာ မဟုတ်ကြောင်း ။ သူတို့ ရဲ့ တဖက်သပ်ဆန်တာကို မကြိုက်လို့သိစေချင်တဲ့ သဘောနဲ့့ပြောရခြင်းဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ။ ပြောပြပြီး ကို့ယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ဆက်လုပ်ဖို့သူ့ ရုံးခန်းကနေ ကျေနပ်စွာ ထွက်ခွာခဲ့ ပါတယ် ။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီ သူဌေးငတိ ကိုယ့်ကို ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားလေးတခွန်းကြောင့်ပါဘဲ။
မင်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့။ နောက်နောင်ဆိုရင် ဒီလို မဖြစ်စေရဘူးလို့ ငါဂတိပေးပါတယ် တဲ့ 
ဒါက ဒီရောက်ပြီးပထမ ဦးဆုံးအကြိမ် အလုပ်ရှင်အပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ မကျေနပ်မှုကို ဖေါ်ထုတ် အရေးဆို မှုတခုပါ ။
ကိုယ့် ဘက်က မှန်တယ်ထင်ရင် ကြောက်မနေဘဲ ပြောမှ နောက်တကြိမ် ဒီလို ထပ်ပြီးအနိုင်ကျင့် မခံရအောင် ။ နဂါးမှန်းသိအောင် တခါတလေ အမောက်ထောင်ပြရတဲ့အခြေအနေလေးတွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
(နောက်ရက်မှဆက်ပြီး ဒီသဌေးငတိနဲ့အရစ်တက်ရတဲ့ အကြောင်းဆက်ပါမယ် ။ခုလောလောဆယ်တော့ လက်ရှိ အကြွေးလေး ပြတ်အောင် လုပ်ရအုံးမှာမို့ ပါ ။) :))
:kiki : at 3/28/2009 03:53:00 PM
နီးခြင်း ဝေးခြင်း ပညတ်ခြင်းမှာ
မင်းဟာ ငါနဲ့အဝေးဆုံး ကမ္ဘာ။
ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ပြုံးပျော်ခြင်းမှာ
မင်းကို ချစ်တာ အဓိက ပါ။
အဝေးတွင် ကြွေးတင် ပေးမပြေခြင်းမှာ
ငါဘဲ အမြဲစဉ် ပေးဆပ်မှာ။
စိတ်နှောင် အရိပ်မှောင် လရောင်မဲ့ ရင်
ငါပင် ထာဝစဉ် ရင်ဆိုင်ချင်။
အစုတ်တက ရှုပ်ပွ ဒုက္ခများစွာ
ကိုယ်သာ ကြိတ်မှိတ် ခံစားမှာ။
ပျော်ရွှင် သုခ သံသာများဟာ
မင်းအတွက် သီးသန့်ဖြစ်စေရာ။
ဥပက္ခာ ပြုရက်တာ ခံရလေတဲ့ ဘဝပေမို့ ၊
ဆန္ဒတွေရှိပေမဲ့အမှန်မပြတဲ့ငါ့ဦးနှောက်မှာ
( Tension တွေများလို့Chatting တွေလည်း မဝင်ချင်ပါ။ အိပ်မက်ဆိုးက နိုးထချင်ပါမှလမိုက်ညရဲ့ဝင်္ကဘာထဲ တဝဲဝဲလည်နေမိလို့ ဝေးတမြေက မေမေရေ ကယ်ပါအုံးဗျို့ ။
အလုပ်ကြွေးတွေ ဆပ်မကုန်သေးပါ။အမှားတရံ မရှိပေမဲ့အမှန်တရားလည်း ရှာမတွေ့ နိုင်သေးတဲ့ အဝေးရောက် တမ်းတခြင်းတခု )
:kiki : at 3/26/2009 11:57:00 AM
အကြွေး ဆို ဘယ်အကြွေးမှ မကောင်းပါ ။
မိမိ အပေါ်မှာထိခိုက်တတ်သလို သူတပါးအပေါ်မှာလဲ ထိခိုက်စေတတ်တယ်။
ဒီသဘောတရားကို ဒီနေ့ မှ မျက်ဝါးထင်ထင် ခံစားလိုက်ရလို့ဒီအကြောင်းလေး ရေးဖြစ်သွားတာပါ ။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ကိစ္စတော့ မဟုတ်လိုက်ပါဘူး။
အရင်ကတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကြွေးကင်းတယ်ဘဲ ထင်ထားမိတာ။
ဟုတ်တယ်လေ ။ ဒီအသက်အရွယ်ထိ လူများဆီမှာ ဘယ်တုံးကမှ ပိုက်ဆံ ချေးတာ ငှားတာမှ မလုပ်ခဲ့ မိဖူးလို့ ပါ ။
။ဖုရားစူးရ ပါစေရဲ့။ကိုယ့်မိဘဆီကတော့ ယူခဲ့ ဖူးတာပေါ့ ။ စုန်ရေ လေးတွေလေ ။
ချေးငှားသုံးတတ်တဲ့အကျင့် ကို မရှိခဲ့ တာ အမှန်ဘဲလေ ။ မရှိရင် မရှိသလို နေလိုက်တယ် ။ နေခဲ့ တယ် ။
ဒီမှာနေတာ ။ အလုပ်လုပ်တာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ ပြီဘဲ ။ စစချင်းကတော့ အမိမြေကို မတတ်သာလို့စွန့် စား
ပြီးစွန့် ခွာ လာခဲ့ ရတဲ့ လူတိုင်းကြုံတွေ့ ရတဲ့ဒုက္ခ ပေါင်းများစွာ ကို ထုံးစံအတိုင်း ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့ ကြရတာ ။အပို
မပြောလိုတော့ပါဘူး ။နောက်ပိုင်းကျတော့လည်း အတွေ့ အကြုံအရ ။ အနဲနဲ့ အများ အဆင်ပြေလာတတ်ကြပါတယ် ။
ဒီတော့ကိုယ့်လောက်အဆင်မပြေတဲ့သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း ။ မိတ်ဆွေ ၊ ဆွေမျိုးမကင်းသူ တချို့ 
့လာပြီးအကူအညီတောင်းတာ ၊ ဂဂျီဂဂျောင်ကျတာ ၊ တချို့ကျတော့အထက်စီးနဲ့ (နင့်ကိုငါအရင်က
ကူညီပေးထားခဲ့ဘူးတော့ အခုကျေးဇူးပြန်ဆပ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ ) ချေးတယ် ၊ ငှားတယ်ပေါ့ ။
ကိုယ့်မှာက ရေလျှံနေတာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့သူတို့ ကို ကူညီနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာလေး ရှိနေတာဆိုတော့ 
စိတ်ပျော့တဲ့ခပ်ညံ့ ညံ့ ကိုယ်က မ ငြင်းဆိုတတ်တော့ လည်းရှိသလောက်လေး ထုတ်ပေးမိနေကြ။
ချေးငှားသူတို့ ထုံးစ့အတိုင်း ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ပြန်ပေးပါမယ်ဆို ပြီ ၊ အချိန်တန်တော့ နေ့ ရွှေ့ညရွှေ့။
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် သူတောင်းစားလို လိုက်တောင်းနေရတာလည်းမလုပ်ချင်တော့ ( အဆင်ပြေရင်
၊အချိန်တန်ပြန်ပေးမှာဘဲလေလို့ ကိုယ်ကလဲ ထင်နေခဲ့ တော့) ၃လလောက် .ခဏပေးသုံးပါဆိုပြီး ခု ၇
နှစ်လောက်ကြာတဲ့ ထိ ပြန်မရသေးတာလဲ ရှိပါရဲ့။ အဲဒီတုံးက တန်ဖိုးငွေနဲ့ ပြန်တွက်ကြည့် ရင် ခုဆို ဗမာပြည်
မှာဆံပင်ကောက်ရုံတင်မက ဖင်ကောက်ပါစီးလို့ ရနေပြီ ။ ခုတော့ ဖင်ကောက်ဖို့ မပြောနဲ့လိန်ပိန်သွားနေတာလေးနဲ
့ဘဲ နှစ်ပါးသွားနေရသေးတယ် ။ ဒီလို ဒီလို လူတွေက မကောင်းကြတာလေ ။ဒါက တယောက် ။
နောက်တယောက်ကတော့ ပြန်မရနိုင်မှန်းသိလို့မေ့ထားလိုက်ပါပြီလေ ။ ဒါတောင် ခုချိန်ထိ ကိုယ့်ကို
မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘူး ။ရှောင်နေတာလေ ။ တခါတလေ လမ်းမှာ တွေ့ ရင် ရှောင်လင်သိုင်းကွက်နဲ့့အမြန်ရှောင်သွားတာ ၊ လူတွေဟာ အတော်ရီစရာကောင်းတယ် ၊ တခါတလေကျတော့လဲ သနားစရာ ၊ တခါတရံကျတော့ မုန်းစရာ ။ အမြင်ကပ်စရာ ။ အမျိုးမျိုးပါဘဲ ၊
အတော်အသင့် ချွေတာစုဆောင်းထားတာလေးရှိ်နေတယ်ဆိုတာလဲ သူတို့ က သိနေတာဆိုတော့ မပေးပြန်ရင်လည်း၊
ကျေးဇူးကန်းတယ်လို့ နောက်ကွယ်မှာ အပြောခံခဲ့ ရဘူးတာ ။ အဲဒီတုံးက အတော်လေး ဒေါသထွက် မိပါသေးတယ် ။
ဒါပေမဲ့အမေမှာထားဘူးတဲ့ ၊ ပြောခဲ့ ဘူးတဲ့စကားလေးတခွန်း ၊ ပြန်ကြားမိ သတိရမိလို့ ။
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ကောင်းအောင်ထားပါ ၊မှန်အောင်နေပါ ။ကိုယ့်စေတနာ ၊ကိုယ့်ကိုပြန်အကျိုးပေးလိမ့်မယ် တဲ့ ။ အမေက ငယ်စဉ်တည်းက သူနာပြုဆရာမလုပ်ခဲ့တာ ပင်စင်ယူတဲ့ အထိ ။စာကြီးပေကြီးတွေတော့ ဖတ်တာသိပ်မတွေ့ ဖူးပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကို ဗမာစာအုပ်ထက်ပိုဖတ်တတ်တယ် ။ သူ ပင်စင်ယူပြီးနောက်ပိုင်းမှဘဲ ဘုရားစာ ၊ တရား စာအုပ်တွေ ဖတ်တာတွေ့ ဘူးတော့ ။ တခါတလေ အခါကြီး ရက်ကြီူး အချိန်မျိုးမှာသူ့ ကို လာကန်တော့ကြတဲ့ တပည့်တပန်းတွေ ။ သားသမီးမြေးမြစ်တွေကို ပါဠိလို ဆုပေးတာတွေ မလုပ်တတ်ဖူး ။ ရှမ်းသံဝဲဝဲနဲ့၊ ရိုးရိုးတန်းတန်းဗမာလိုဆုပေးတာတောင် တခါတလေ အမြီးအမောက်မတည့် တတ်လို့ကိုယ်တို့ တခါတလေ ထိုင်ကန်တော့လို့တောင် မဖြောင့်ဘူး ။အော်ရီကြတတ်တာ ။ဒါပေမဲ့ ဆိုလိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုတော့ သိပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ဆုံးမသြဝါဒ စကားဆိုတာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရွတ်ဖတ်မှရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ။ နားလည် လွယ် အောင်ပေးတဲ့ ဆု ကို မှတ်သားပြီး လိုက်ကျင့် ကြံကြဖို့ ဘဲ အရေးကြီးတာပါ ။
ဒါကတော့ သူများကိုယ့်အပေါ်ကျန်နေ တင်နေတဲ့ အကြွေးလေးတွေထဲက သတိရသလောက်လေးတွေပါ ။ကိုယ်
မကောင်းတဲ့ အကျင့်တခုက ဘယ်တော့မှ စာရင်းဇယားဆိုတာ မရှိ ခဲ့၊ မလုပ်ခဲ့တာပါဘဲ ။ပြန်မရနိုင်လို့တော့မှ
အလှူလို့သဘောထားလို့ကလည်း ကုသိုလ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ အဲဒါတွေက
အမှန်တကယ် စိတ်ထဲ က ကိုယ်စိတ်နှစ်တန် ပြတ်သားပြီးလှူခဲ့တန်းခဲ့ တာတွေ မဟုတ်လို့ ပါဘဲ။
အခု အဓိကပြောချင်တဲ့ အကြွေးကတော့ ဘယ်သူ့ အပေါ်မှာမှ ကိုယ်တင်ထားတဲ့ အကြွေးမဟုတ်သလို ၊
ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်အပေါ်လာတင်နေတဲ့ အကြွေးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်အပေါ်ပြန်တင်နေတဲ့ ကိုယ့်အကြွေးတွေပါ ။ အလုပ်ကြွေးတွေလေ ။အပျင်းကြီးတဲ့ကိုယ် ။အလုပ်တခုကို နေ့ ရွှေ့ညရွှေ့ လုပ်တတ်တဲ့ ကိုယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်က အတော်လေး ခေါင်းစားသွားခဲ့ တယ် ။ အလုပ် (ဆေးရုံ) ကို စစ်ဆေးရေး-အောဒစ် -Audit ဝင်မယ်ပေါ့ ။ အစကတော့ အေးဆေးဘဲ ။ ဝင်လေ ၊ဘာဖြစ်လဲ ။ခါတိုင်းလဲ ဝင်နေကြ ။မထူးဆန်းပါဘူး ပေါ့ ။ကိုယ်နဲ့ မှ သိပ်မဆိုင်တာဘဲဟာ ။ ဒါတွေက သူတို့ Admin အပိုင်းနဲ့၊ သူဌေးအပိုင်းနဲ့ဆိုင်တာဘဲဟာ ။
။ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်ပုံမှန် နေ့ တိုင်းလုပ်နေကျ တာဝန်တွေ ပြီးရင် ပြီးတာဘဲပေါ့ ဆိုပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့ ဘဲနေတာလေ ။
ခုတော့မဟုတ်ဘူး ။ နေရင်းထိုင်ရင်း အပိုဆုက လာပြီးပေါက်လိုက်သေးရဲ့။ပြီးခဲ့ တဲ့တနှစ်စာ လူနာမှတ်တမ်းတွေကို ကွန်ပြူတာနဲ့ အကုန် ပြန်ရိုက်ရမယ်တဲ့လေ ။ အရင်ကတော့လူနာဆေးရုံဆင်းမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ်(case summary )ကိုဘဲ ကွန်ပြူတာနဲ့ရေးမှတ်ထားရတာ ။ကျန်တဲ့ Inpatient Order ,Daily Progress တွေကတော့ လက်ရေးနဲ့ ဘဲ ရေးလေ့ရှိတာ လေ ။ အဲဒါကို ခု တပါတ်အတွင်း ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပြီးအောင် လုပ်လို့ ရပါ့မလဲ ။ ကွန်ပြူတာဆိုတာကြီး သိပ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ ကိုယ်တယောက် အခုမှ ဒုက္ခနဲ့ လှလှ နဲ့ လာတွေ့ နေရပါပြီ။ ခုတော့ ကိုယ့်အကြွေးမဟုတ်ခဲ့ တဲ့ ကိုယ့်အလုပ်ကအကြွေးတွေလဲ ကိုယ့်အကြွေး ဖြစ်လိုဖြစ်နဲ့ ။
။နောက်ပြီး အရင်က လူအများပြောတတ်ကြတဲ့စကားတခွန်းရှိပါတယ် ကြွေးတင်ကျွန်ဖြစ် တဲ့။
သူများဆီမှာ အကြွေးတင်ပြီး ပြန်မဆပ်နိုင်လို့ကျွန်ဖြစ်ရတာပေါ့နော် ။
အခုတော့ ကိုယ့်ဘဝဟာ ကျွန်ဖြစ်ကြွေးတင် လို့ပြောင်းပြန်ဘဲ ပြောရတော့ မှာပါ ။
သူများတိုင်းပြည်လာ ကျွန်ခံနေရရုံမျှမက သူ့ ကျွန်ဖြစ်လို့ ကြွေးတင်နေရ ပါတယ် ။
ဪ ..ဘဝဝဋ်ကြွေး ။ သံသရာကြွေးတွေ မတင်ကျန်ရလေအောင် ။ အမြန်ဆုံး ဆပ်ရပါတော့မယ် ။
( မဆပ်လို့ လဲ မရတော့ဘုး ၊ နီးရာဒါး ကြောက်ရသေးတယ် ။ စီးပွားကျတဲ့ ခေတ်ပျက်ကြီးထဲမှာလေ .. ရှိတဲ့့အလုပ်လေး မပြုတ်ဖို့။ ကျားမြှီးဆွဲ ဆိုလဲ ဆွဲရတော့ မှာပါဘဲ )
ကြွေးပူကြီးအမြန်ဆပ်ဖို့အလုပ်ကြိုးစားရအုံးမှာမို့ဒီ post လေးတင်ပြီး ရက်အတော်ကြာ အဆက်ပြတ်နေရအုံးမယ်
ရှိသမျှ ဝဋ်တွေ ကြွေးတွေ အမြန်ဆုံး လွတ်ကင်းပါရစေတော့ ....
:kiki : at 3/23/2009 03:49:00 PM
ဒီပုံလေးတွေကတော့ တရုပ်ပြည်က ဗမာတန်းပေါ့ ( ကမ္ဘာတဝှမ်း နိုင်ငံတွေ အတော်များများမှာ တရုပ်တန်း( ချိုင်းနားတောင်း) ..
ဆိုတာရှိနေကြတယ်လေ ။ ဒါပေမဲ့ ဗမာတန်းဆိုတာတော့ရှားတယ်ပေါ့ )
ဒီပုံတွေမှာမြင်ရတဲ့နေရာလေးကတော့တနင်္ဂနွေနေ့လူအစည်ဆုံးလို့ ပြောလို့ ရတဲ့ဝှာရှင်းကျဲ ( Hwa Shin Street ) ပါ ။
ထိုင်ပေမြို့ ရဲ့ကျုံးဟို မြို့ နယ်လေးမှာ ။ ဗမာပြည်ကပြန်လာတဲ့ လူတွေ စုနေကြတဲ့ ရပ်ကွက်လေးတခုပါ ၊
ဒီလမ်းလေးမှာ တနင်္ဂနွေတရက်ဆို မနက်မှညနေအထိ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ လူအစည်ဆုံးလေ။
ဗမာ၊ရှမ်း၊ တရုပ်၊ကုလား၊ယိုးဒယား စာ အတော် စုံအောင်ရပါတယ် ။ မုန့် ဟင်းခါး ။အုန်းနို့ ခေါက်ဆွဲ ။လက်သုတ်စုံ
ကြာဆံဟင်းခါး ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ၊ကြေးအိုး၊ ဆီချက် ၊အကြော်စုံ ။ ဘူးသီးကြော် ။မန္တလေးပဲကြော် ။ဗယာကြော်
၊စမူဆာကြော် ၊ လဖက်ရည် က အစ ၊မလိုင်၊ နံပြား ၊ပလာတာ ၊အာလူး ပူရီ ။ ဒန်ပေါက်၊ ဗမာ ဟင်းမျိုးစုံ ။
ပြီးတော့ ဗမာပြန်ဆရာဝန်တွေ ဖွင့် ထားတဲ့ဆေးခန်းတွေ ၃-၄ ခု ၊dental , OG, Internal Medicine Clinic လေးတွေ..
ဗမာပြည်ကိုငွေလွှဲချင်ရင်၊ ပါဆယ်ထုပ်ပို့ ချင်ရင်လဲ ဗမာဖြစ်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကနေတဆင့် ပို့ လို့ ရတယ်လေ ။
ပြီးတော့ မကြာခင်မှာကျရောက်တော့မဲ့ သင်္ကြန်ပွဲနဲ့တခြား ပွဲတော်ရက်ကြီးတွေ..ဥပမာ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲ ၊လိုမျိုးလေးတွေ
ဆိုရင်လည်း ဒီနေရာလေး. ၊ လမ်း လေးကို ဟိုဘက် ဒီဘက် ထိပ် ပိတ်ပြီး အလယ် မှာ ကျင်းပကြတာများပ်ါတယ် ။ ဒီလမ်းနဲ့ တဆက်တည်း
မှာရှိတဲ့ကျုံးရှောက်ကျဲ မှာလည်း ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တခု ရှိပါသေးတယ်
ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးကို တရုပ်ပြည်က ဗမာတန်းလို့ ခေါ်ရင်လဲ မမှားပါဘူး ...
ဗမာပြည်နဲ့ ဝေးနေရပေမဲ့ဗမာပြည်ရဲ့အငွေ့ အသက်လေးတွေ ရနေသေးလို့အားရက်တိုင်း ဒီနေရာလေး ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
အလွမ်းပြေ ..စိတ်ဖြေစရာ နေရာလေး တခုပါ ။
:kiki : at 3/18/2009 09:03:00 PM
ဝေးတနေရာမှ တွေးဆကာ ပူနေရသူအဖို့ 
အမြဲပင် မြင်ချင်ကြားချင်ပေါ့ သူ့ ရုပ်သွင်နဲ့ သူ့ သံစဉ်
အချိန်ရှိသရွေ့ ကွန်ရှေ့ မှာထိုင်၊ ကွန်ပစ်ကာစောင့်မှိုင်နေရပ
ကန်သင်းရိုးထက်က ရွှေဗျိုင်းနဲ့ အပြိုင် လည်တိုင်ကိုရှည်လို့ 
ယိုင်နဲ့ စွာဗျာ ပွေ ။
ဝင်လာချိန်မှာ သူတမင်ကလာ မမြင်ယောင်ဆောင်တာများ
သူခေါ်လိုက်ရင် ဘဝင်ဟိုက်အောင် အိုက်တင်တောင်ကိုယ်မလုပ်အား
သူခေါ်တုံးမှာ ကိုယ်မပြုံးရင် မုန်းတော့မယ်အထင်ရောက်
ဘယ်လောက်ပင်အိပ်ချင်ပေမဲ့အခွင့်ရေးလေးတမျှင်တောင်
မဆုံးနိုင်လောက်အောင် အရေးထားမိပါရဲ့ 
သို့ သော်ငြားလည်း ကိုယ့် chatting တွေ သူမဝင်လိုတိုင်း
connection ကို အပြစ်ပုံချ ငြင်းခဲ့ တဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ
ငတုံး ငအ ကိုယ့်မှာတော့ မဆီမဆိုင် လဒ မှိုင်၍
ထိုထို လဒ အသက ကို ဂုဏ်ပုဒ်ဖေါ်ကာ ရွတ်ဆိုမိသေး
ရွှေမေတ္တာတွေ အခါခါပေးလို့ ။
ထို တချိန်တည်းတွင် ပျိုကညာခင်မှာဖြင့်
အကောင့်မျိုးစုံ အဖုံဖုံ နာမည်များစွာနဲ့ 
အီစီကလီ Q Q Q ကာ မြှု နိုင်တဲ့အစွမ်းများဟာဖြင့်ရင် ၊
စွမ်းအားရှင် ထိပ်ခေါင်တင် အလား
သြချရလောက်အောင် ကို ထူးခြား။
( စွမ်းအားရှင်ဆိုတာကို အဓိပ္ပါယ် အကောက်မလွဲကြစေချင်ပါ ။ သံသယ ဆန်ဆန် အတွေးများ တိုက်ဆိုင်နေပါက ခွင့်လွှတ်တော်မူစေချင်ပါ၏ )
:kiki : at 3/17/2009 08:27:00 AM
ဒုက္ခများ ခါးစည်းခံလို့ 
မွေးခဲ့ကျွေးခဲ့ပြုစုခဲ့တဲ့
ယုယမှုအဝဝနဲ့ပညာစုံလင် သင်ကြားစေခဲ့။
တွေ့ မြင်လိုက်တိုင်း ကလေးယောက်လို ထင်မြင်ဆဲမို့ 
ဒီနေ့ ဒီရက် ရောက်ပြန်တိုင်းလည်း
ဘေးဘယာ ဝေးကွာရစေကြောင်းနဲ့ 
ကုသိုလ်တိုးပြု အစုစုကို မျှဝေပေးခဲ့ ။
သို့ ပေမဲ့လည်း အလိုက်မသိ ကိုယ်မိုက်မိ၏
လွန်တာတွေရှိလို့ဝန္တာမိပါ
မွေးမိခင်အား ဦးချတောင်းပန် ကန်တော့ပါချင်၊
နောင်အစဉ် အမှန်ပြင်ကာ နေပါမည်ဟု
:kiki : at 3/16/2009 06:58:00 AM
လာလည်ကြတဲ့ မောင်နှမများ အားလုံး ..ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အတူတူ စားကြသောက်ကြတာပေါ့ နော်။ နောင်နှစ်တွေမှာလည်း ဒီလို အတူ ပျော်ရွှင်နေနိုင်ကြပါစေလို့ ....
:kiki : at 3/16/2009 06:48:00 AM
တိရစ္ဆာန်တွေတောင် ကိုယ့်သားသမီးကို ဘယ်လို ယုယကြင်နာရမှန်း သိကြသေးတယ်နော်...
ဘယ်လိုပုံ ဘယ်လို နည်းနဲ့ အသင့်ကို ယုယပြုစုခဲ့ တာပါလိမ့်....ဘယ်လိုဘဲဖြစ်နေပါစေ တခါတရံ အဆင်မသင့်တဲ့ အချိန် ဒီလိုလေးတွေလည်း ဖြစ်တတ်ကြမှာပါ။
ဒါကို အပြစ်လို့ဆိုရမှာလား ။ ။ ? ? ?
:kiki : at 3/14/2009 11:32:00 AM
ပျင်းနေလို့ကစားဖေါ်လေးတကောင် မွေးထားတယ် ။ သူ့ ကို သိပ်တော့မ စ ကြနဲ့ နော် ။ စိတ်မထင်ရင် ကိုက်တတ်တယ် ။
အဟဲ မျောက်ကိုက်တဲ့ နေရာ ရွှေချရတယ် လို့ တော့ ကြားဘူးတာဘဲ .. ဘာလို့ လဲတော့ မသိပါဘူး ။ သိချင်ရင် စမ်းကြည့် ကျပေါ့။
တခုခုဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြည့်ရှင်းကျ.....:) ။ဆေးဖိုးထက်ဝါးခ က ပိုဈေးကြီးတယ် ... :))
:kiki : at 3/13/2009 09:27:00 AM
အို....တကိုယ်လုံး ဖုံးဖုံးဖိဖိ လုပ်မှပေါ့....
လူမှားနေမယ်နော် အမောင်မင်း။ အလျင်မလိုနဲ့ .. သေချာအောင်ကြည့် ပါအုံး
: 看看阿拉伯人的結婚, 好像在拍鬼片哦~
ခုတလောမင်္ဂလာဆောင်ရန်စိုင်းပြင်းနေကြသော ဘလော့ဂ်ဂါ မောင်လေးများ အထူးသတိပြုနိုင်ကြရန် (စေတနာ အပြည့်အဝဖြင့်) အသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ မပြောမရှိနဲ့ နော်။
အဲလိုနေရာမျိုးမှာတော့ လုံးဝ( လုံးဝ) မင်္ဂလာ သွားမဆောင်ကြပါရန်။
၁ -- မိမိ၏ သူတို့ သမီး ဘယ်တယောက်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားနိုင်ခြင်း
၂--ပရိသတ်က သူရဲကား ဇာတ်လမ်းရိုက်နေကြသည် ဟု အထင်လွဲ နိုင်ခြင်း
တို့ ကြောင့် ဖြစ်ပါသည် ။
ဒီက တရုပ်မတွေ က ကုလားလို( အာရပ် လို ) ဆောင်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲ ကို အတော်စိတ်ဝင်စားကြပုံရတယ်။ သူငယ်ချင်းယောက်ပို့ လာပေးတဲ့ပုံလေးတွေပါ။။ :)
:kiki : at 3/12/2009 02:41:00 AM
အချိန်တွေကလည်း ကုန်တာမြန်သလိုပါဘဲ ။ပျော်နေတဲ့ အချိန်တွေမို့ ဒီလိုထင်မိတာလား ။
အချိန်က သူ့ ဟာသူ ပုံမှန် သွားနေတာ...လူတွေရဲ့စိတ်.. ကိုယ့်ဟာကိုယ် လှည့် စားနေကြတာပါ။
ဒီတနှစ်လည်း ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်ချိန် အလုပ် လုပ်ရ အုံးမှာပါဘဲ။
နားရက်နဲ့ မဆုံတဲ့ဒီမွေးရက်လေးမှာ ခါတိုင်းလိုဘဲ ပုံမှန် အလုပ်တက် ၊ ဆင်း ပေါ့။
ဘာမှတော့ ထူးထူးခြားခြားမရှိလှပါဘူး ။ မွေးခြင်းနဲ့ သေခြင်းကြား ကာလ ကို လူ့ ဘဝလို့ ခေါ်ရရင် ၊ဒီဘဝမှာ သေခြင်းဖက် တရက်ပိုနီးလာတာဘဲပေါ့ ။
ဒီတော့ မသေခင်စပ်ကြားလေး ဒီဘဝ အတွက် လုပ်ချင်တာ ။လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ရင်း နောင်ဘဝအတွက်ပါ လုပ်နိုင်တာလေး လုပ်ရအုံးမယ်လေ ။
ခါတိုင်းနှစ်တွေကတော့ မနက်စောစောအမေ့ဖုံးဆက်ပေးရတယ် ။ သူ့ ဆီကနေ ဆက်ဖို့ အဆင်မပြေဘူးလေ။
ဒါကြောင့်ဆက်ဖို့ လွယ်တဲ့ သူက ဆက်ပေးရတာ ။ အမေရဲ့ ဆုံးမ စကားတသီတတန်း နာခံ ပြီး
သူပေးတဲ့ Birthday Wish ကြားရတာ ဒီမွေးနေ့ ရက်ရဲ့အဓိကပါဘဲ ။ အင်း... ဒီ နှစ်တော့ အမေ့ဆီ ဖုံးဆက်ဖို့ တောင် အခြေအနေ မရှိဘူး ။ ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး ။ ဘုရားဖူး ထွက်နေတဲ့အမေ ၊ သူ့ သားသမီးမြေးမြစ်တွေ အားလုံးရဲ့ မွေးနေ့ ရက်တွေ အမှတ်သညာကောင်းတဲ့အမေ ။
ဒီရက်မှာ သတိတရုကုသိုလ်ထူးတွေပိုလုပ်ပြီး အားလုံးအတွက် မေတ္တာပို့အမျှဝေနေမှာမို့ကိုယ်တိုင်မကြားရတဲ့ဆုလေးကို စိတ်ကူးနဲ့ ဘဲယူရတော့မယ်လေ ။
ဒါလဲတမျိုးကောင်းပါတယ် ။ အဝေးရောက်မေတ္တာပို့ ခြင်းနဲ့ ခံယူခြင်းပေါ့ ။
:kiki : at 3/10/2009 02:41:00 AM
မိဘတွေ ရဲ့သားသမီးပေါ်ထားရှိတဲ့ မေတ္တာတွေ
ဘယ်တော့ မှ လျော့နဲ ခမ်းခြောက်သွားခြင်းမရှိပါ ။
လောကကြီးမှာ စုန်ရေ ဆိုတာ ရှိနေကြမို့ 
တချို့ က ဒါကို ဝတ္တရားအရလို့အထင်မှတ်နေကြပါတယ် ။
မိဘတိုင်းက ကိုယ့်သားသမီး တွေကို
ကိုယ့် ဘဝတခုလုံးနဲ့့ရင်းပြီး
ချစ်ခဲ့ကြ ။ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့ ကြတာပါ ။
ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ် အငတ်ခံ ပြီး ကိုယ့်သားသမီးတွေ
လူအလည်ပုံမှာမျက်နှာ မငယ်ရလေအောင် ၊
အတတ်နိုင်ဆုံး ပြုလုပ်ပေးခဲ့ ကြတာပါ။
လူလားမြောက်တဲ့ အထိ ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက် ။
ပညာသင်ပေး ။ ကောင်းတာညွှန်ပြပေး ။
ရှေ့ လျှောက်ရမဲ့ ဘဝတခုလုံး အတွက်
အစစ အရာရာ စီမံ ပေးခဲ့ ကြတာတွေဟာလဲ
ဒါတွေကို နားမလည် ၊ သဘောမပေါက်ကြတဲ့သားသမီး အချို့...
သူတို့ မွေးထားတာဘဲ ။
မကျွေးချင်ရင် ၊ မပေးချင်ရင်
ဘာလို့ အစကတည်းက မွေးထားကြသေးလဲ ...
တဲ့ လေ ။
စုန်ရေတွေသာများပြီး ဆန်ရေကို နားမလည် ။
အသိခေါက်ခက် အဝင်နက်တဲ့ သားသမီးများ
ခလုပ်ထိမှ အမိတ တတ်ကြတဲ့သားသမီးများ ။
ရလေ လိုလေ လောဘတွေနဲ့မိဘကို ဒုက္ခ မျိုးစုံ ပေးနေကြတဲ့သားသမီးများ ။
ဒီ ပုံပြင်လေးကို ကြည့်ပြီး အသိတရားများ အချိန်မှီ ရနိုင်ကြပါစေ လို့ ။
ပန်းသီးပင်ကြီးနဲ့ တူတဲ့မိဘ ...
တဖြေးဖြေးကြီးပြင်းလာတဲ့ကောင်လေး ...သားဆိုးလေး နဲ့တူပါတယ်။
ငယ်စဉ်တည်းက သူ့ အတွက် ပျော်စရာ ၊ အပန်းဖြေစရာ မျိုးစုံ ပေးခဲ့ တဲ့ 
ဒီပန်းသီးပင်ကြီးအတွက် သူ ကြီးပြင်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အချိန်ထိ
ဘာတခုမှ လုပ်ပေးခဲ့ ခြင်းမရှိ ခဲ့ဘူး။
လိုတဲ့ အချိန်မှာမှလာပြီး ကစားတယ်။
ဒုက္ခ ရောက်တဲ့ အချိန်မှ လာပြီး တိုင်တည်
သူ့ ဘဝကောင်းစားဖို့အဝေးမှာသွားပြီး ဥစ္စာရှာဖို့ 
ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့ပင်စည်ကို ခုတ်လှဲ ပြီး အသုံးချ သွားလိုက်သေးရဲ့ ။
အခုလို ဒီကောင်လေး ( ကြီးလာတော့ ဒီလူကြီးပေါ့ )
သူ့ လိုနေရာ မှာဆိုရင်ဘယ်လို ဆုံးဖြတ် မှာလဲ ။
သစ်ပင်ကြီးကို လှဲဖြတ် ခုတ်ထစ်ပြီး
ကိုယ်လိုရာ ကိုယ့်ခရီး ဆက် မှာလား
နောက်ဆုံးတော့လဲ ငုတ်တို သာသာ ကျန်တော့တဲ့ မသန် မစွမ်း
ဒီ အပင်အိုကြီးဆီ မှာဘဲ ပြန်လာ ။ ဘဝ အမောတွေ ဖြေ ရရင်
မိဘ သစ်ပင်အို ငုတ်တိုတိုလေးက အပြုံးမပျက်ဝတ္တရားမပျက် ၊
အသင့် ကို ဆီးကြို ပြုစု နေအုံး မယ် ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။
ဒီလောကကြီးမှာ ဆန်ရေ ဆိုတာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင် မိဘ တွေကို တတ် နိုင်သလောက်
ကျေးဇူးဆပ်ဖို့သတိလေးရကြရင် ဖြင့်
ဘယ်လောက် ချမ်းမြေ့ စရာကောင်းလိုက်မလဲ နော်။
ပုံတိုင်းမှာ တရုပ်လိုရော၊ အင်္ဂလိပ်လို ပါ အဓိပ္ပါယ် ရှင်းလင်းပြီးသားမို့ လို့ 
တပုံ ချင်းစီကို ဘာသာပြန် ပေးစရာ မလိုတော့ဘူး လို့ ထင်ပါတယ် ။
သူငယ်ချင်းတယောက်ပေးပို့ လာတဲ့ပုံလေးများကို
ခံစားပြီး ပြန်လည် ဖြည့်စွက်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ် ။
ဒီထက်မက နက်နဲလှတဲ့အဓိပ္ပါယ် တွေလဲ ဒီပုံလေးကို ဖန်တီးရေးဆွဲ သူဆီမှာ ရှိနေမှာပါ။
ခုရေးပြထားတာကတော့ ဒီပုံပြင်လေးကိုကြည့်ပြီး ဖတ်ပြီးတော့
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ခံစားချက် သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီပုံပြင်လေးထဲက သားဆိုးလို ဖြစ်နေပြီလားလို့ ပါ။
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် တချိန်ကတည်း က
သူ့ ပင်စည်ကို ခုတ်ဖြတ် အဝေးထိရွက်လွှင့်နေခဲ့ရလို့ ပါဘဲ။
ခုတော့ လောကကြီးအကြောင်း သိသင့်သလောက် သိရပါပြီ။
အဆိုးနဲ့အကောင်း ခွဲခြား နားလည်တတ်ပါပြီ။
မိဘရိပ်ဟာ အအေးချမ်းဆုံး ၊ အငြိမ်းချမ်းဆုံးဆိုတာ
သိရပါပြီ ။အချိန်တွေ မနှောင်းသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ် ။
ငုတ်တိုအဖြစ်နဲ့ တူတဲ့အမေ့ရင်ခွင်ဆီ ပြန်ပြီး နားခိုချင်နေမိပြီ လေ။
အဝေးရောက် သားဆိုး သမီးဆိုးလေးတွေ မကြာခင် တရက်မှာ
ကျေးဇူးပြု ၍ စောင့်နေပေးပါ နော် ။။
:kiki : at 3/08/2009 08:58:00 PM